Maqaalka PJ Taei ee Martech Zone |
Maqaallada by PJ Taei
PJ waa aasaasaha iyo madaxweynaha Uscreen, oo dhan-ka-ah madal lacag abuurista video taas oo awood u siinaysa ganacsatada fiidiyowga iyo hal abuureyaasha inay lacag ka helaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin ayna dhisaan bulshooyinka kobcaya iyo ganacsiyada ku xeeran fiidiyowyadooda.
Talaado, Agoosto 27, 2019 Talaado, Agoosto 27, 2019 PJ Taei
Waxaa jira sabab macquul ah oo dhab ah oo sababta rukunka ah ee loo qoro Video On Demand (SVOD) uu hada u qarxo: waa waxa dadku rabaan. Maanta macaamiil badan ayaa doorta waxyaabaha fiidiyowga ee ay dooran karaan oo ay daawan karaan baahida, marka loo eego daawashada caadiga ah. Xogtuna waxay muujineysaa in SVOD uusan gaabin. Falanqeeyayaashu waxay saadaalinayaan kobcitaankooda inay gaaraan 232 milyan oo calaamadee daawade sannadka 2020 ee Mareykanka. Daawadayaasha caalamiga ah ayaa la filayaa inay qarxaan ilaa 411 milyan sanadka 2022, halka ay markii hore ahayd 283